डोनल्ड ट्रम्पको ब्रिटेन भ्रमण: कूटनीतिक अप्ठ्यारा ल्याउन सक्ने सम्भावित पाँच विषय - BBC News नेपाली
डोनल्ड ट्रम्पको ब्रिटेन भ्रमण: कूटनीतिक अप्ठ्यारा ल्याउन सक्ने सम्भावित पाँच विषय
‏जेम्स ल्यान्डेल कूटनीतिक संवाददाता
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प अहिले ब्रिटेनको बहुप्रतिक्षित राजकीय भ्रमणमा छन्।
यो तीनदिने भ्रमणका क्रममा उनी राजपरिवार र राजनीतिज्ञहरूले आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्।
तर यो तामझामपूर्ण कार्यक्रमको पछाडि दुई देशबीच नीतिगत भिन्नताहरू छन् जसले ब्रिटेन र अमेरिकालाई विभाजित गर्छ।
राजकीय भ्रमणहरू राजसी विषय हुन् जसमा भ्रमण समारोह जत्तिनै महत्त्व राजनीतिलाई पनि दिइन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि केही विषयमा चिप्लिने सम्भावना ज्यादा हुन्छ।
गत वर्ष ट्रम्पले विन्डसर क्यासलमा जाँदा महारानीभन्दा अगाडि हिँडेका थिए। महारानीलाई पछाडिको भाग फर्काउनु अनुचित थियो।
के उनले महारानीलाई सही रुपमा सम्बोधन गर्लान्? हालै ह्वाइट हाउसले महारानीलाई "हर रोएल मेजेष्टि" भनेको थियो जुन गलत थियो।
शाही परिवारका सदस्यबारे काम गरिरहेकालाई थाहा हुनुपर्छ त्यहाँ "हर मेजेष्टि" मात्रै हुनुपर्थ्यो।
के सन् २०११ मा राष्ट्रपति ओबामाले जस्तै अहिले ट्रम्पले पनि राष्ट्रिय गानका बेला पनि बोलिरहलान्?
जब ट्रम्पले क्लेरेन्स हाउसमा वेल्सका राजकुमारसँग चियाका लागि भेट्छन् तब जलवायु परिवर्तनबारे आफ्ना फरक धारणाहरू व्यक्त नगरि बस्न सक्लान्?
Image caption गत वर्ष ब्रिटेन भ्रमणका क्रममा महारानीसँगको भेटका क्रममा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प
भ्रमणका क्रममा कुराहरू बिगारेर राष्ट्रपतिले केही पाउने छैनन्।
शाही परिवारको तामझामपूर्ण र धुमधामसँग आयोजना गरिएको समारोहहरू उनलाई मन परेको छ र पुन: निर्वाचनका लागि आफ्नो देशमा चुनावी अभियान भइरहँदा उनी ब्रिटेनमा खिचिने तस्बिरहरू राम्रो देखिउन् भन्ने चाहन्छन्।
तर प्रश्न रहन्छ उनले आफ्ना प्रोटोकल हेर्ने टोलीबाट कति सुझावहरू लिन्छन्।
सैद्धान्तिक रुपमा एउटा ठूलो कुटनीतिक अप्ठ्यारा ल्याउनसक्ने सम्भावित विषय भनेको डचेज अफ ससेक्स मेगन मार्कल हुनसक्छिन्, जसले विगतमा शाही परिवारको सदस्य हुनुभन्दाअघि ट्रम्पको धारणा विपरित अभिव्यक्‍ति दिएकी थिइन्।
ट्रम्पले द सन नामक पत्रिकासँग कुरा गर्दै मार्कल आफूबारे निकै "दुष्ट" भएको प्रति आफू अचम्मित भएको बताएका थिए।
संयोगवश ट्रम्पको भ्रमणका बेला मार्कलको छोरा जन्मिएको एक महिना पनि भएको छैन र उनले ट्रम्पलाई राजकीय भ्रमणका क्रममा भेट्ने छैनन्।
तर ब्रिटिश शाही परिवारमा हालसालै बिहे गरेर दुई देशबीचको निकट सम्बन्धलाई प्रतिकात्मक अर्थ दिएकी अमेरिकी नागरिक मार्कल आफ्नो राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्ने समारोहहरूमा सहभागी नभएको विषयको चर्चा चल्नेछ।
डोनल्ड ट्रम्पद्वारा मेगन मार्कललाई 'दुष्ट' नभनेको दाबी
को फेरिएला: शाही परिवार कि मेगन?
ट्रम्पको भ्रमण ब्रिटेनको राजनीतिको एकदमै जटिल समयमा भएको छ। उनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा टरिजा मेलाई भेट्दैछन् जो कन्जरभेटिभ नेताको रुपमा यो साताको अन्त्यमा बाहिरिँदै छन्।
ब्रिटेन अझै ब्रेक्जिटसम्बन्धी बहसको चपेटामा छ। द सन पत्रिकालाई दिइएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मेले वार्ताका क्रममा युरोपेली संघ इयुलाई सबै अधिकारको अनुमति दिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
र, त्यसको एकदिनपछि छापिएको अन्तर्वार्तामा उनले सन्डे टाइम्सलाई ट्रम्पले मेका कट्टर आलोचक नाइजल फरासलाई ब्रेक्जिटबारे वार्ता गर्न सरकारले ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।
ट्रम्पले यसअघि नै फरासलाई समर्थन गर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। हालै बनेको ब्रेक्जिट पार्टीको नेता आफ्नो साथी रहेको र उनीप्रति आफ्नो सम्मान रहेको उनले बताएका थिए।
Image caption यसपटकको भ्रमणमा पनि गत वर्षजस्तै राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रधानमन्त्री मेले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ
के ट्रम्पले फरासलाई भेट्ने समय पाउलान्?
ट्रम्प र फरासबीचको औपचारिक भेटलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिटले अस्वीकार गरेको छ।
तर लण्डनस्थित अमेरिकी राजदूतको निवास विनफिल्ड हाउसमा संक्षिप्त भेटका लागि उनीहरूसँग समय हुनसक्नेछ। दुवै पक्षले यो विषयलाई अस्वीकार गरेका छैनन्।
एकजना मन्त्रीले यसो गर्दा निराशाजनक र अशिष्ट देखिनसक्ने बताएका छन्।
तर आफ्नो जस्तै विचार भएका राजनीतिज्ञलाई भेट्ने मौका ट्रम्प हत्तपत्त गुमाउँदैनन्।
मुख्य दुई विपक्षी नेता जेरेमी कर्बिन र सर भिन्जे केबलले रात्रीभोजमा खाना खाने निम्तो अस्वीकार गरे पनि त्यसबारे ट्रम्प नराम्रो मानेका छैनन्।
ब्रिटेनमा बहिर्गमनको अन्योल!
कन्जरभेटिभ पार्टीमा नयाँ नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला ट्रम्पको भ्रमण भएको छ। उक्त प्रतिस्पर्धाले ब्रिटेनको भावी प्रधानमन्त्री तय गर्नेछ।
उनले पहिल्यै चुनावी दौडमा रहेका बोरिस जनसनलाई समर्थन गरिसकेका छन्। द सन पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा उनले पूर्व विदेशमन्त्री समेत रहेका उनी देशका उत्कृष्ट प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै उनले राम्रो काम गर्ने बताए।
एकातर्फ, कन्जरभेटिभ पार्टी तर्फका सांसद र पार्टी सदस्य छन् जो सम्भावित भावी प्रधानमन्त्रीको निकट साझेदारसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको भन्दै यसबाट प्रभावित हुनेछन्।
अर्कोतर्फ, अलोकप्रिय अमेरिकी राष्ट्रपतिको अनौपचारिक समर्थनले ब्रिटेनको बृहत् मतदातालाई जनसनबारे खुसी नबनाउन सक्छ किनभने ट्रम्पप्रति उनीहरूको मिश्रित भावना रहेको छ।
गत वर्ष ब्रिटेनमा रहँदा पनि ट्रम्पले अमेरिकाका पूर्व नागरिक जनसन देशको महान् प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने भन्दै आफ्नो समर्थन जनाएका थिए।
ट्रम्पले लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनबारे पनि कुनै टिप्पणी जनाए भने उत्तिकै रुचीपूर्ण हुनेछ।
कोर्बिनले थुप्रै अमेरिकी नीतिहरूको विरोध गरेका छन्।
द सन पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले शाही भोजमा उपस्थित हुन कोर्बिनले अस्वीकार गरेको कुराले आफू अपमानित नभएको बताएका छन्।
"सायद उनी गलत गर्दैछन् किनभने मलाई लाग्छ उनी अमेरिकासँगै मिल्न चाहन्छन्।"
पदबाट छिट्टै बाहिरिन लागेकी प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट र समारोहहरू लक्षित भ्रमण मूलभूत नीतिहरूबारे छलफल भने बाध्यतावश गर्न लागिएको देखिन्छ।
तर एकतालाई जोड दिइनुपर्ने यो भ्रमणमा मतभेदहरू थुप्रै हुनेछन्।
एउटा उदाहरण मध्य पूर्वको विषय हो।
इरानको व्यवहार परिवर्तनबारे ब्रिटेन र अमेरिकाबीच मतभेद देखिन्छ।
ब्रिटेनले अझै पनि तेहरानको परमाणु कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्न बनाइएको सम्झौतालाई समर्थन गर्छ भने अमेरिकाले गर्दैन। अमेरिका इरानसँग व्यापार गर्ने कुनै पनि ब्रिटेनको ब्याङ्क वा कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन तयार छ।
अमेरिकाले आवश्यक पर्दा हमला गर्ने 'क्यारिअर स्ट्राइक फोर्स' र बीफाइभटु बमवर्षक उक्त क्षेत्रमा खटाइसकेको छ जसका कारण कारबाहीहरू तीब्र हुने र युद्ध नै सम्म हुनसक्ने आशङ्का कतिपय ब्रिटिश कूटनीतिज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।
यस्ता मतभेदहरू सार्वजनिक रुपमा उठाउन ट्रम्प चाहन्छन् होला?
चीन पनि दुई देशको विषय हो। चीन र अमेरिकाबीचको बढ्दो मुठभेडले ब्रिटिश नीतिनिर्मातालाई चिन्तित बनाइरहेको छ।
ह्वावेईको विषय पनि छ। युकेको फाइभजी मोबाइल नेटवर्कको एउटा हिस्सा बनाउन चिनियाँ टेलिकम कम्पनीलाई दिने कि नदिने भन्ने विषयमा ब्रिटेनका मन्त्रीहरूले अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहँदै अमेरिका ब्रिटेनसँग रिसाइसकेको छ।
उनीहरूको शङ्का छ कि चिनियाँ सरकारको पहुँच रहेको ह्वावेईमार्फत् ब्रिटेन र त्यही कारण अमेरिकाको गोप्य सूचनाहरू दिनसक्नेछ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले ट्रम्पले यसबारे राजकीय भ्रमणका बेला कुरा उठाउने चेतावनी मात्रै दिएका छैनन् त्यसको परिणाम स्वरुप आफ्ना गुप्तचर सम्बन्धी सूचनाहरूलाई समेत सीमित तुल्याउन सक्ने धम्की दिएका छन्।
त्यो भन्नुको अर्थ तथाकथित "विशेष सम्बन्ध"को मुख्य आधार सधैँ गुप्तचरसम्बन्धी सूचनाहरूको आदानप्रदान थियो जुन राजनीतिक मतभेदको चर्काचर्कीबाट बाहिर सुरक्षा अधिकारीहरूबीच जीवन्त रहनुपर्ने सम्बन्ध हो।
डोनल्ड ट्रम्प: अडिओ रेकर्ड हुँदाहुदै अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा मेगन मार्कललाई 'दुष्ट' भनेको अस्वीकार
3 जुन 2019